8th MUM Bagan City Director - Ma Aye Moh Moh Zaw
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ​ပုဂံမြို့​​ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ​ပုဂံမြို့​၏ City Director အဖြစ် Ma Aye Moh Moh Zaw မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
MUM 2019 Top5 - At GS5And GM6Launching Ceremony
Miss Universe Myanmar 2019 Top (5) were attending Launching Ceremony Of The All-NewGS5And GM 6.
World Beauty Queen Myanmar 2019 Linn's Evening Gown
Final ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝတ်ဆင်မယ့် World Beauty Queen Myanmar 2019 Linn ရဲ့ ညနေခင်းဝတ်စုံလေးပါ။
MUM 2019 Swe Zin Htet Idea Magazine Shooting
Miss Universe Myanmar 2019 Swe Zin Htet is shooting for Idea Magazine.
Linn Htet Htet Kyaw Activity with Korea Hanbok
An Nyeong Ha Seyo
World Beauty Queen Myanmar Linn Htet Htet Kyaw ကိုးရီးယား Hanbok ဝတ်စုံလေးနဲ့ ယနေ့ Activity
8th MUM Hap-An City Director - Ko Pyae Sone (Fashion Designer - Hpa-An)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ​ဘားအံမြို့​​ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ဘားအံမြို့​၏ City Director အဖြစ် Ko Pyae Sone (Fashion Designer - Hpa-An) မှ ဆက်​လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကြီး၏ နှစ် (၈၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကြီး၏ နှစ် (၈၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ် Fund Raising Dinner Night တွင် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ အလှမယ်များမှ ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ခဲ့ကြပါသည်။
Make Up - NK Aung Sha
Photo - Khant Min Htin
MUM 2019 Swe Zin Htet attend Bumrungrad Clinic Yangon's Hair Fair
မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၉ အလှမယ် ဆွေဇင်ထက်သည် (၁၇-၈-၁၉) ရက်နေ့ မြန်မာပလာဇာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Bumrungrad Clinic Yangon ၏ ကျန်းမာရေးပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Korea နိုင်ငံ Seoul မြို့သို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လင်းထက်ထက်ကျော် င် ရန်ကုန်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာ
Korea နိုင်ငံ Seoul မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် World Beauty Queen ပြိုင်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် World Beauty Queen Myanmar 2019 အလှမယ် လင်းထက်ထက်ကျော်သည် ယနေ့ညတွင် ရန်ကုန်အပြည်
World Beauty Queen ပြိုင်ပွဲကြီးသို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ် လင်းထက်ထက်ကျော်သည် (15-8-2019) ရက်နေ့ညတွင် Korea Airline ဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ထွက်ခွာမည့်ရက်နှင့်အချိန် ပြောင
Korea နိုင်ငံ Seoul မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် World Beauty Queen ပြိုင်ပွဲကြီးသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် World Beauty Queen Myanmar 2019 လင်းထက်ထက်ကျော်သည် (၈-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့ ညအချိန်တွင် Korea Airline ဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိ
မယ်စကြာဝဠာမြန်မာအလှမယ်များသည် ယနေ့ (၇-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ထန်းတပင်မြို့နယ် ထိန်​နှစ်ပင်ကျေးရွာရှိ မျိူးဆက်​သစ်​မိဘ​မေတ္တာ ပရဟိတ မိဘမဲ့​ကျောင်းတွင် သက်​ငယ်​မုဒိမ်း ပပျောက်​​ရေး၊ ကာကွယ်​​ရေးအသိပညာ​ပေး​ဟော​ပြောခြင်း၊ ကလေးများအား နေ့လည်စာ ကျွေးမွေး
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ​နေပြည်​​တော်​​မြို့​​တော် ​ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ​နေပြည်​​တော်​မြို့​တော်​၏ City Director အဖြစ် Dr.